Yintoni ekufuneka ndiyazi ngaphambi kokuya kwinto endinokuyonwabela eyenziwa kwi-intanethi ngoZoom? - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
U-Zoom yiwebhusayithi yenye inkampani esebenza ngeintanethi yokubamba intlanganiso ngevidiyo ibe inokusetyenziswa kwiikhompyutha, kwiithablethi nakwiiselfowuni .
Izinto ezifunekayo kwizixhobo nakuqhakamshelwano lwe-intanethi
Ukwenza ungaziwa ukuba ungubani xa usebenzisa uZoom
Ukusasazwa ngoxa ziqhutywa
Apho ungadibana khona nombuki zindwendwe wakho
Ingxaki ngezinto eziyimfihlo okanye ngokhuseleko ngexesha lokuqhutywa kwento enokonwatyelwa
Ngaphambi kokuba ungene kwinto yakho enokonwatyelwa, qiniseka ukuba isixhobo sakho siyazifikelela iimfaneleko zezixhobo ezimele zisetyenziswe kuZoom uze uvavanye uqhakamshelwano lweintanethi yakho ngokujoyina intlanganiso yokuvanvaya.
Ukuze ufunde okungakumbi malunga nezinto ezifunekayo kwikhompyutha, funda Izinto ezifunekayo Kwinkqubo yePC, eyeMac, kunye neLinux inqaku Leziko Loncedo likaZoom. Ukuze ufunde okungakumbi malunga nezinto ezifunekayo kwiiselfowuni, funda inqakuLezinto Ezifunekayo Kwinkqubo ye-iOS, i-iPadOS, kunye neAndroid. Ukuze uvavanye uqhakamshelwano lwakho lweintanethi, joyina intlanganiso yokuvavanya.
Izinto zakho eziyimfihlo zibalulekile kuthi. Nanga amanyathelo esiwathathileyo ukuze sikuncede ukhusele izinto zakho eziyimfihlo ebudeni bento bezinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi, kunye namacebiso okukunceda ukhusele izinto zakho eziyimfihlo xa usebenzisa uZoom. Ukuba enye yezi setingi zilandelayo ayizosebenza kwinto yakho onokuyonwabela, siza kukwazisa ngaphambi kokuba ubhukishe.
Indlela uAirbnb akunceda ngayo ukhusele izinto zakho eziyimfihlo xa usebenzisa uZoom:
Into nganye onokuyonwabela yenzelwa Isazisi sentlanganiso esikhuselwa ngephasiwedi eyahlukileyo
Izinto Onokuzonwabela azinakurekhodwa ngoZoom
Ividiyo yondwendwe iyacinywa xa lungena kwigumbi lentlanganiso kuZoom
Iindwendwe azikwazi kubonisa abanye izikrini zazo ngexesha lento enokonwatyelwa
Iindwendwe azikwazi kuncokola ngemiyalezo kunye nezinye iindwendwe ngoZoom
Iifayile azikwazi kuthunyelwa ngoZoom
Indawo ethi "igumbi lokulinda" isebenza ngokuzenzekelayo, ukuze ababuki zindwendwe bangenise undwendwe ngalunye kwigumbi lentlanganiso kaZoom
Amacebiso okukunceda ukhusele izinto zakho eziyimfihlo:
Ungayibonisi mntu ilinki yentlanganiso kaZoom ekhuselwe ngephasiwedi
Sebenzisa i-app kaZoom esexesheni
Qaphela izinto ezikungqongileyo nezisemva kwakho xa ukwikhamera—umbuki zindwendwe wakho nezinye iindwendwe ziza kwazi ukuzibona
Zenze ungavakali de ube ulungele ukuthetha
Qaphela xa usebenzisa indawo yokuncokola njengeqela kuba bonke abantu abakhoyo baza kwazi kuyifunda into oyithumelayo
Ukuba awufuni kuchaza igama lakho elipheleleyo kwiindwendwe nakubabuki zindwendwe bento enokonwatyelwa, ungafaka esinye isiteketiso okanye usebenzise igama lodwa xa ungena kuZoom
Nceda ungathathi iifoto zombuki ndwendwe wakho okanye zezinye iindwendwe ngaphandle kwemvume yabo
Ukuze kube lula ngabantu abaneziphene nabanezinye izidingo ukujoyina into enokonwatyelwa kwi-intanethi, senze indawo yokubhala yonke into ethethwayo kuZoom. Inkonzo yokubhala yonke into ithethwayo isenokunikezwa ngumbuki zindwendwe okanye umntu omncedisayo, uZoom okanye omnye umniki nkonzo ibe isenokungafumaneki kuzo zonke iilwimi.
Kwezinye iimeko, izinto onokuzonwabela kwi-intanethi zisenokusasazwa ngoxa ziqhutywa kusetyenziswa amajelo anjengoFacebook, uYoutube okanye uKaltura. Ungafunda okungakumbi ngendlela intlanganiso zikaZoom ezisasazwa ngqo ngazo ngoxa ziqhutywa kuYouTube kunye noFacebook kwiZiko Loncedo lakwaZoom. Ukuba Into Enokonwatyelwa yakwaAirbnb iza kusasazwa ngoxa iqhutywa kwenye iwebhusayithi, siza kwazisa ngaphambi kokuba ubhukishe.
Uza kufumana ilinki yokujoyina into enokonwatyelwa kwi-intanethi kwi-imeyile yakho yokuqinisekisa, nakwi-imeyile yokukukhumbuza ethunyelwa ngaphambi kokuba into enokonwatyelwa kwi-intanethi iqalise. Unokuyifumana nakwinkcazelo yakho yokubhukisha efumaneka kwiphephaLohambo.
Ngena kuZoom malunga nemizuzu eyi-5 ngaphambi kwexesha ukuze uqiniseke ukuba yonke into isebenza kakuhle ibe ufika kwangethuba kwinto enokonwatyelwa. Kubalulekile ukuba uphawule ukuba umbuki zindwendwe angakhetha ukungazamkeli iindwendwe ezifika emva kwexesha, ibe iindwendwe ezifika emva kwexesha azikufanelekeli ukubuyiselwa imali. Funda okungakumbi kwinqaku lethu Lepolisi Engokubuyuswa Kwemali Yondwendwe.
Qinisekisa ukuba unelinki efanelekileyo yento yakho enokonwatyelwa kwi-intanethi. Ukuba ilinki ayisebenzi, vala uZoom uze uphinde uzame ukusebenzisa ilinki. Ukuba iqhubeka ingasebenzi, thumela umyalezo kumbuki zindwendwe wakho ukuze uqinisekise enoba naye unengxaki ngoZoom.
Ukuba uZoom ufuna ufake iphasiwedi, thumela umyalezo kumbuki zindwendwe wakho usebenzisa uAirbnb uze ucele iphasiwedi.
Okokugqibela, ukuba umbuki zindwendwe akanazo iingxaki, yiya kwiZiko Loncedo likaZoom.
Ukuba udibana nayo nantoni na engafanelekanga, okanye unengxaki malunga nezinto eziyimfihlo okanye ngokhuseleko ngexesha le nto enokonwatyelwaqhakamshelana nabaxhasi bentsapho baka-Airbnb uze uyixele. Nikezela ngenkcazelo eninzi kangangoko kunokwenzeka ibe siza kuyiphanda ingxaki.